ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေခြင်း, ဒူဘိုင်း, အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join
ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join
ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပ်စုထဲမှာဂျော့ဘ်
အောက်တိုဘာလ 16, 2017
အောက်တိုဘာလ 30, 2017
WhatsApp ကို Group မှ join
ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအပေါ်အံ့သြဖွယ်ကျွမ်းကျင်သူများအသိုင်းအဝိုင်း
ပါဝင္ရန္ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကိုအုပ်စု။ ကြိုဆိုပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အကျွမ်းကျင်သူများအသိုင်းအဝိုင်း။ သင်ကအလုပ်လစ်လပ်သောနေရာရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ဥရောပတိုက်တွင်လည်းဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်အထူးကု။ ပင်လယ်ကွေ့တွင်အများအပြား WhatsApp ကိုအုပျစုမြားထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းပင်လယ်ကွေ့တွင် Whatsapp အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေယူအေအီးအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျအစဉျအမွဲတဲ့ပုဂ္ဂလိကဖြတ်ပြီးလာကြပြီ ဒူဘိုင်းမြို့ Whatsapp Group မှ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးသည် WhatsApp ကိုအဖွဲ့ဝင် ယူအေအီးအတွက်လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုမျှဝေပါ။ အဆိုပါ စုဆောင်းမှုစျေးကွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များသင်သည်သူတို့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အပွင့်လျက်ရှိပါသည်တဲ့အာမခံချက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ Join!
WhatsApp ကို Facebook မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏န်ဆောင်မှုတစ်ခုပျော်ရွှင်အသုံးပြုသူဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Whatsapp အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူတစ်ဦးအုပ်စုလင့်များစတင်နေကြသည်။ WhatsApp ကို လူကြိုက်အများဆုံးလူမှုမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တယ် လျှောက်လွှာ။ အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရှာနေကြသူလူတို့အဘို့ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ created ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းအုပ်စုတစ်စုအသိုင်းအဝိုင်း.
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join
အပြုသဘောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လည်းထူထောင်လာနိုင်အောင်တွစ်တာ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးအလုပ် Finder။ မိုဘိုင်းဖုန်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်း join နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် site ပေါ်တွင်ထက်ပိုနေတဲ့လူဦးရေသန်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ယူအေအီးအတွက်မန်နေဂျာငှားရမ်းရန်သင့် CV ကိုများနှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အတှေးအတွေအကြောင်းလည်းသူတို့ကိုမမေး။ ထိုမှတပါး, အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာနေရာလွတ်အဘို့ကို select လုပ်ပါလိမ့်မည်သို့။ ကျနော်တို့အုပ်စုများအထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေအမျိုးအစားနှင့်ဖွဲ့ 20 အလုပ်အကိုင်အုပ်စုများထက်ပိုဖွဲ့စည်းဖန်တီးခဲ့ကြ ဒူဘိုင်းများအတွက်.
ဤ "ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကို" ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြဖွယ် WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအုပ်စုတစ်စု သီးသန့်အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဝေမျှ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူသင်တို့သည်ငါတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းမှသင့်ကိုယ်ပိုင် WhatsApp ကိုဖုန်းနံပါတ် add နိုင်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အဖြစ်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာရှာပြီးသူတို့ကိုသင့်ရဲ့အုပ်စုသည်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်စေခြင်းငှါရိုးရှင်းသော link ကိုရန်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်ပေးနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အများကြီးရှိပါတယ် ကူဝိတ်အတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ယူအေအီးတည်နေရာအတွက်ဒူဘိုင်းနေဆဲကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အလုပ်ရှာဖွေရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါတို့ ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကူညီခြင်း.
အဘယ်သူသည် HR WhatsApp ကိုအဖွဲ့များပူးပေါင်းနိုင်သလဲ
ယူအေအီးအတွက်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုများနှင့် HR မန်နေဂျာများ: အလုပ်အကိုင်အဖွင့်ဝေမျှဖို့.
နေသောပြည်သူ့ ဒူဘိုင်း 2018 နှင့် 2019 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ
HR ဒါရိုက်တာ: လက်ရှိကမ်းလှမ်းမှု & မည်သူမဆိုရရှိရန်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်း။
Whatsapp Group မှကိုကြည့်ရန်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ်မှတ်ချက် join ရန်။
ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ WhatsApp ကိုအုပ်စု
အမျိုးမျိုးသော WhatsApp ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအုပ်စုများကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုအံ့သြဖွယ်စုဆောင်းခြင်း။ အပြုသဘောဘက်တွင်ပိုကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုဆောင်အရာရှိကူညီပေးသည်။ အသစ်က WhatsApp ကိုဖြည့်ဆည်း ထို့အပြင်ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာအလုပ်ရှာနေကြသူမိတ်ဆွေများကို နေ့စဉ်သူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပါ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, သငျသညျအဘယ်သူသည်အသစ်ကနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်ပါသည်သိကြဘူး။ သို့မဟုတ်ပင် အလုပ်ရှာဖွေဘို့အချို့အကြံပြုချက်များကိုသင်ပို့။ WhatsApp ကိုကောင်းမွန်သည် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ် ယခုသင်ကသူတို့ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျပြည်ပမှာအလုပ်ရှာနေလျှင်။ သင်တို့သည်လည်းကုမ္ပဏီများကငှားရမ်းရန်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet နှင့် ကောင်းပြီလူသိများအလုပ်ပေါ်တယ်တဲ့ Monster ပင်လယ်ကွေ့ငှားရမ်း။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ပါဝင္ရန္ ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ WhatsApp ကိုအုပ်စုs
အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအဘို့သတိပေး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ Huffington ပို့စ်ကနေတစ်ဦးကမကြာသေးမီကပို့စ်အသစ်ကပြည်တော်ပြန် waring သငျသညျအစဉျအမွဲယူအေအီး၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးရှုံးစဉ်းစားမထားဘူး! သငျသညျအိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများမှာအထူးသဖြင့်လျှင်, သင်ကအရမ်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်ကောင်းသောအမှုကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဝန်ထမ်းဖြစ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ သင်လိုအပ် လုံလောက်အောင်စမတ်ဖြစ်နှင့်ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်.
သငျသညျဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်။ သင်တို့အပေါ်မှာနေမြဲနေစဉ် သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေ။ သငျသညျဥပမာအိန္ဒိယများအတွက်အိမ်တွင်းတိုင်းပြည်ပြင်ပမှာရှိနေစဉ်။ ထိုအခါအလုပ်လက်ခံရရှိအိန္ဒိယတွင်အချို့သောကုမ္ပဏီထံမှလတ်ဆတ်ကိုဆက်ကပ်။ ထိုအခါ အလုပ်အကိုင်အသောကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးစားမှ wort ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းခဲ့။ ဒါကြောင့်သင်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ပြန်ရွှေ့ပါ။ ပြီးတော့သင်ကနုတ်ထွက်စာလက်ခံမှုနှင့်အတူ, ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်တစ်ဦးနုတ်ထွက်စာကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏ဟောင်းအလုပ်ရှင်လျှင်အစိုးရ t ကိုတစ်ဦးအသိပေးပေးပို့ပါ။ သင်ဦးကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းငှါပြန်လာတဲ့အခါသင်တရားမဝင်ထို့နောက်ယူအေအီးကျန်ရစ်ပြီ။
WhatsApp ကို Group မှ join ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်!
နယူးကုန်စည်ပြပွဲ 2020 စီမံကိန်းများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ
အသစ်အလုပ်အကိုင်များပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာပေါင်းစပ်လာကြ၏။ အသစ်အလုပ်အကိုင်များဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ၏တန်ဖိုးထံသို့လာကြ၏။ အစိုးရနှင့်ဆက်စပ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှေးဝမျးကြောငျးမှန်းချက်ရဲ့။ ခဲ့ MBA ဘွဲ့ပညာရေးနှင့်အတူလူများအတွက်အလုပ်သစ်ဖွင့်လှစ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ယူအေအီးအသစ်ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတတက်လာပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စသကဲ့သို့, ပို့ကုန်စီမံကိန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ပြီးသား $ 33 ဘီလီယံကိုဝင်တိုက်, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီကနေအစီရင်ခံစာသစ်အရသိရသည် အစိုးရစာမျက်နှာများ။
ကုန်စည်ပြပွဲများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏ကိန်းဂဏန်းကြီးမားဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းကို-related ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အမြင်၌တည်၏။ ကုန်စည်ပြပွဲဖြည်းဖြည်းယူအေအီးအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်လာမယ့်။ သာသုံးနှစ်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနေရာရှာဖွေနေသည့်အကြီးစားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ထွက်ခွာသည်။ ကန်-ပယ်လိမ့်မည်ဟုအောက်တိုဘာလ 20, 2020 အပေါ်များ၏သင်တန်း, ဒီအလုပ်အကိုင်-related အဖြစ်အပျက်။ နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများမေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ရတဲ့၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်းအတွက်ဆက်စပ်အလုပ်နေရာလွတ်စျေးကွက်ရှာတွေ့ပုံနှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Whatsapp နှင့်အတူ ပင်လယ်ကွေ့နေရာလွတ်ဘို့ related အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွန်ယက်ကို။ သငျသညျကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် WhatsApp ကိုဤ related မည်ဖြစ်ကြောင်းထို့အပြင်စီမံကိန်းအသစ်သုတေသနပြပါ။ ဖြစ်နိုင်သငျသညျကိုဘယ်လိုစဉ်းစားနေကြသည် ?. ယခုမိုဘိုင်းဖုန်းဈေးကွက်ယူအေအီးကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သစ်ကိုကြည့်ဖူး ဒူဘိုင်းရဲ့ WhatsApp ကိုချတ်ကျော်အာရပ်ရုပ်ပြောင်။ သစ်ကို updated WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာအတွင်း, သင်အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မိုဘိုင်း application ကို Facebook မှာထံမှကိုလည်းထောက်လှမ်းရေးမန်နေဂျာနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောကလူကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
WhatsApp ကိုအတူကုန်စည်ပြပွဲစီမံကိန်းကို-related အလုပ်အကိုင်များ
အဆိုပါပံ့ပိုးပေး ယူအေအီးအသစ်အခွင့်အလမ်း။ အဓိကအားဖြင့်အစိုးရအမှုဆောင်အရာရှိကတော့ $ 33-35 ဘီလီယံအထိစီမံကိန်းအတွက်ကဆိုသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ပါဝင်သည် Philipino အလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ နှင့်ဆက်စပ်စီမံကိန်းများ ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကလုပ်သားများငှားရမ်း။ ဤမျှလောက်များစွာသောသစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာလွတ်တစ်ခုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ဒီ 40,000 အသစ်ကနေရာလွတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူပေးလိမ့်မည်ထက်ပိုမိုစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။
အတူတူအလုပ်လုပ်ကုန်စည်ပြပွဲစီမံကိန်းနှင့် WhatsApp ကို။ ထို့အပြင်ပင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် WhatsApp ကိုအသင်း၏ 200 အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်နေ့တိုင်းမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဘီလီယံခန့် 55 ကျော်အသုံးပြုသူများမက်ဆေ့ခ်ျပို့တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ကျော်ကို Whatsapp ကမ္ဘာ့ဖလား Gov ထိပ်သီးအစည်းအဝေး စီမံကိန်းကို။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, WhatsApp ကိုဘီလီယံကျော်အသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့အဘို့ကြီးထွားလာပါလိမ့်မည်။ ထိုအထဲကအလုပ်လုပ်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ရလိမ့်မည်။
အဖြစ်အာရပ်ကမ္ဘာ ကောင်းစွာသည်ဤအထူးစီမံကိနျးအတှကျသစ်ကိုရောထွေး-လူမျိုးပေါင်းစုံငှားရမ်းပါလိမ့်မည်s ကို။ သို့သော်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အတွက်လူနေအိမ်နေရာလွတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားဖြစ်စာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းကို-related အလုပ်အကိုင်။ အဖြစ်ပေါ်ဧညျ့အခြိနျပိုငျးနေရာလွတ် ဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အသစ်သောစီမံကိန်းများကိုအလုပ်အကိုင်များ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဧည့်သည်တစ်ဦးအတွက်လာ။
ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်
WhatsApp ကိုအုပ်စု ပို. အရေးကြီးသောသည်အခြားဆက်သွယ်ရေးမန်နေဂျာများထက်ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ features တွေအတွက်ဖွင့် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်ကိုရှာယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုသူအများအပြား surprising ဤသည်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ပျက်သမျှကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေနေ။ ယခုကျွမ်းကျင်သူများအများစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများ join လို့ရပါတယ်။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒါဝေးမည်သူမဆိုနိုင် ပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်လျှောက်ထား။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်း WhatsApp ကို messenger ကိုမှကိုယ်ပိုင် CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ တဖန်သင်တို့ပင်ယူအေအီး၏မြို့တော်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစု။ အသစ်သောဧည့်သည်များငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီအဖြစ်မှန်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, မည်သူမဆိုနိုင် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာ.
သငျသညျအလုပျတချင်သောဖြစ်ရပ်အတွက်အကျိုးဆက် WhatsApp ကို messenger ကိုသုံးပြီးစတင်ပါ။ သင်ကညာဘက်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပြင်ဆင်ပါ။ ယခုကာလ၌သောကြောင့် ကျွန်တော်ပင်ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေကူညီပေးနေကြပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူက may ဟာအံ့သြဖွယ်အဖုံးအက္ခရာအောင် သင်လွတ်ဆင်းသက်ကူညီ။ ထိုအခါလျှင်သင်ညာဘက်သင်၏လက်၌ရှိသမျှကိုရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အလုပ်အကိုင်များ WhatsApp ကိုအုပ်စုတစ်စုအပေါ်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ။ ထိုအခါသူတို့ကိုမေးဖို့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ဘို့.
ယူအေအီးနိုင်ငံကတစ်ဦးအသင်းချုပ်ဖြစ်ပါသည် ခုနစျပါးစော်ဘွား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ၏။ သင်ပြုသည့်အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင် Whatsapp update ကိုသငျသညျအခမဲ့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မည်သူမဆိုစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့, WhatsApp ကိုအပေါ်လူတွေရှိရလိမ့်မည်။ သူကားအဘယ်သူပါလိမ့်မယ် ကျိန်းသေ7စော်ဘွားအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်၏လမ်းတလျှောက်သင်ကူညီ?။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းစနစ် အလုပ်တစ်ခုရဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည် မိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျော်။
ဒူဘိုင်းဟာ android တွေ့ရှိမှုယောဘသည်အဘို့အ Whatsapp
android ဖုန်းများအတွက် Whatsapp ယခု3နိုင်ငံများတွင်ကျော်ကျော် 195 ဘီလီယံခန့်ကလူဦးအထိမြင့်တက်။ သုံးပြီးရေရှည်မှာထက်ပို 200 ကုမ္ပဏီများမှ Whatsapp status ကို ၏ရည်ရွယ်ချက် ဆော့ဒ်အာရေဗျစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ။ ယခုတွင်သင်သည်ဒူဘိုင်းအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့ရန်သင့်စာရင်းတွင်တစ်ဦးအဆက်အသွယ် add WhatsApp ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ် အဘူဒါဘီအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့.
ယေဘုယျအားဖြင့်ယနေ့ဒူဘိုင်းအတွက်အချိန်မရွေးဖုန်းစကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်စကားပြော။ မိုဘိုင်းအတွက် Whatsapp app နဲ့ ပြတင်းပေါက်အဘို့အ Whatsapp အခမဲ့ဒါပေမယ့်လည်းမရရှိနိုင်မှသာဖြစ်ပါသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်၏ပရိုဖိုင်မြှင့်တင်။ Google ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်အပေါ် base ။ ကျနော်တို့လူတွေအလုပ်ရှာဖွေနေကြသူပြောနိုင်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာ, စကားပြော။ ၏သင်တန်း, သင်သည်သင်၏မြည်းကိုတက်ရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော်ပြန်, သင်ကရလိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့မှအခွင့်အလမ်း။ ကိုသာမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာစာပို့သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join နှင့်ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်ကိုစတင်ပါ။ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များရန်သင့်အသေးစိတ်ကို Add, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကို မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်စုဆောင်းရလိမ့်မည်။ ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်အများအတွက် tool အဖြစ် Whatsapp messenger ကို။ ပြတင်းပေါက်သေချာတာပေါ့များအတွက် Whatsapp, လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သင့်ကိုကူညီနိုင်သူကလူရှိရလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအနည်းဆုံးအားသင်လုပ်နိုင်သည် အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေရန်သင့်ကိုကူညီချဉ်းကပ်ရှာဖွေစုဆောင်း.
အဲဒီမှာအများအပြားအလုပ် site ကိုသော်လည်းလက်တွေ့မန်နေဂျင်း WhatsApp ကိုအလုပ်အကူအညီနဲ့သာဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်စူပါလွယ်ကူပါတယ်သည် WhatsApp ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်း။ one click နှင့်သင်ရှာဖွေစုဆောင်းကို update နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျယူအေအီးမှပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း။ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join !. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လိမ့်မည် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီ.
ပါဝင္ရန္ နိုင်ငံတကာအလုပ်များ အသိုင်းအဝိုင်း
အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်သူများ။ ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Whatsapp Group မှ join ပေးပါ ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုများအတွက်။ ကျနော်တို့ 2018 နှင့် 2019 အတွက်ငှားရမ်းကြသူအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိခြင်းနေကြသည်။ ထို့အပွငျရှာဖွေစုဆောင်းတဲ့သူများမှာ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအလုပ်အဖွဲ့ကို link ကိုအသုံးပြုခြင်း။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှမည်သူမဆိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရည်မှန်းချက်လည်းဖြစ်ပါတယ် အကူအညီကိုသင်ရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရှိ အိုင်တီအဘို့။ အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူတွဲပြီး။ ကျွမ်းကျင်သူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း updates များကိုစေရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်စခန်းဂျော့စက်မှုလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ရန်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျ WhatsApp ကို Group မှပူးပေါင်းသည့်အခါနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ သင်ချင်သောသရုပ်ပြနိုင်ပါလိမ့်မည် မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေ.
ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုဖောက်သည်အချို့ရှိခြင်းနေကြသည်။ စုဆောင်းမှုကြော်ငြာတင်သူငှားရမ်းမန်နေဂျာအများစုဟာ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သစ်ကိုငှားရမ်းချင် ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ထို့အပြင်သူတို့သည်တက်ကြွသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုငှားရမ်းလိုကြသည် ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာကစားသမားဘရှာဖွေသူ။ ထိုအသင်သည်သင်၏စံလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ သငျသညျကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာများအတွက်ထားရှိနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းတွင်ပင်ကို Google နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ MBA ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join !. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများယနေ့နှင့်ဖြစ်လာသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်လျှင် လက်ရှိအိန္ဒိယထဲမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းမှရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေ။ ဒါကကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ကျိန်းသေပါပဲ။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်နေရာလွတ်ဘို့အကြီးတန်းအဆင့်ဆင့်မှအငယ်တန်းအဆင့်ဆင့်ကနေလူတွေကိုအားမရနေကြသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုနေရာလွတ်များကဲ့သို့မည်သည့်ဌာနဆိုင်ရာများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒီအမျိုးအစား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေလွယ်ကူသည်.
ဒူဘိုင်းမတ်အလုပ် Finder ဖြစ်လာ
admin ရဲ့ရာထူးနဲ့အတူသို့သော်နိုင်ငံတကာ HR နေရာလွတ်။ အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါစေသော။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများကမ်းလွန် R & D နှင့်တကွသင်ကူညီခြင်းနှင့်အတူကောင်းစွာတစ်ဦးအဖြစ်ကုန်းတွင်းရာထူးအလုပ်လုပ်ကိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ Finder။ သင်ပင်ရောင်းအား & စျေးကွက်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရာထူးအဘို့အထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အုပျစုမြားကိုရှာဖှမိုဘိုင်းနေရာလွတ်ပေါ်တွင်သင်၏အသေးစိတျမှတ်ချက်လေး။ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ် Upload လုပ်ပါ ယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းပူးပေါင်းဘို့တကိုသင်ပယ်ရှင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါနေကြတယ် ပါကစ္စတန်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအုပ်စုတစ်စု.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကံကောင်းနေ့ကဖွစျလိမျ့မညျသင် WhatsApp ကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်အုပ်စုဆက်ပြောသည်နှင့်နေရာချပါလိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက်မြင့်မားတဲ့ paid နေရာလွတ်ဘို့။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင့်အလုပ်အကိုင်ပရိုဖိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုဌာနအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။ နှင့်မန်နေဂျာငှားရမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ရှိသူများအလုပ်အကိုင်အဘို့ကိုတိုက်ရိုက်သင်ဆက်သွယ်ပါ။ ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် ပါကစ္စတန်ကလူစော်ဘွားတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များရောက်ရှိနှင့်ယူအေအီး၏မြို့တော်သွားရောက်ကြည့်ရှု။
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးကအားလုံးကိုအိပ်မက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်း အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည်ကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးအဘို့သင်တို့လိုအပ်ချက်ကတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့ဤမျှလောက်ဆိုးနှင့်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းအဖြစ်။ စော်ဘွားလူနေမှုပုံစံစတဲ့ကျော်ကြားထက်ပိုပါတယ်။ အသစ်သောဧည့်သည်များကလှုံ့ဆျောပေးကူညီပေးနေကြီးမားနေထိုင်သူများနှင့်အတူစျေးကြီးကားများ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနေချင်ပါတယ်သူတို့သည်အထူးသဖြင့်သူမြား။
အဆိုးဆုံးကတော့ သငျသညျစုဆောင်းခံရချိန်တွင်အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းနေသည် ဒီစိတ်ကိုပိုမို Oriental ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အထူးသဖြင့်သစ်ကိုအင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်။ စိတ်ကိုသင်၏ပြည်နယ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ကိုဘယ်လို။ နှင့်နေရာလွတ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အဖွင့်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာနေစောင့်ရှောက်လော့။ အဆိုပါလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ဤအသောသူတို့ကိုမ။ သူတို့ဟာအလွန်ရှိပါတယ် အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအတှကျကောငျး.
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကျော်, ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးအိပ်မက်ရာအရပျ၏နာမတော်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထက် 70,000 သစ်ကိုဟိုတယ်နှင့်စီမံကိန်းများအမြင့်ကပို။ လူတိုင်းအတွက်ကမ္ဘာ့အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ငါတို့မွို့ပြုလုပ်ခြင်း။ သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုရာခရီးအဖြစ်ဒူဘိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့၏ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသုံးပြီးဧည့်သည်များ ကျွန်တော်တစ်ဦးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးစှမျးနိုငျပါ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်လက်ကူညီပေးနေ.
ယူအေအီး၏ပါလီမန်အဆောက်အပင်လယ်ကွေ့တိုင်းပြည်ဒေသတွင်း၌အကြီးမားဆုံး e-commerce အချက်အချာဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့သူကဒူဘိုင်းအမ်းမရိတ်၏ရွှေအိပ်မက်ကြောင်းပြော ba-ကြော်ငြာစိတ်ကူးအလိုမရှိ။ ဤအရပ်ဌာန၌သောကြောင့် သငျသညျ ATM စက်ကနေရွှေကိုဝယ်နိုင်။ သငျသညျအဘူဒါဘီနီးပါးမည်သည့်နေရာအရပ်အတွင်းဟိုတယ် Tel အတွက်ကွန်ပျူတာစနစ်ကနေတဆင့်ရနိုင်သောကြောင့်, ရွှေအရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါ ATM စက်များကိုရွှေစက်နှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကိုရွှေစျေးနှုန်းတိုင်း 10 မိနစ်အပ်ဒိတ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဒေါင်းလုဒ်။ ထိုအခါသူတို့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတ်မြို့စျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီရန်.
တောင်မှကြောင်းနှင့်အတူ, သင်ငွေရှာနိုင်ပါလိမ့်မည် တမြို့ဧရိယာအတွင်း၌။ အာရပ်များ၏သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်, တိုင်းအသစ်ကဧည့်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအတွေ့အကြုံထိုက်တန်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှဒီမှာသင်၏နောက်အားလပ်ရက်တက်သည် planing နေတယ်ဆိုရင်အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း သငျသညျဒူဘိုင်းကောက်သင့်တယ်ဘာကြောင့် တစ်ဦးသာမန်ထက်အမှတ်ရစရာအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။
အိုကေ, သငျသညျ WhatsApp ကိုလက်ျာဘက်အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကိုသိ? ဒါပေမဲ့ အဘယ်ကြောင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနေရာလွတ်ကြိုးစားရန်ကယ့်ကိုထိုက်သည်? ။ ကာတာနိုင်ငံနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အတူအရှေ့အလယ်ပိုင်း, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အဆင့်မြင့်မြင့်မားတဲ့ paid လူနေမှုပုံစံစတဲ့စတင်ရန်ရှာဖွေနေကြသူဘွဲ့ရသစ်ကိုလတ်ဆတ်သောအဘို့။ သငျသညျတက္ကသိုလ်အတွက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြစဉ်ဥပမာ, နေရာချထားရှေ့ဆက်ရှည်လျားသောလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော်ကတည်းကသင်ပညာရေးပွုပါပွီ။ မှအိပ်မက်မဟုတ်တိုင်းကျောင်းသား ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်စတင်နိုင်။ ဥပမာအားဖြင့်, အနည်းငယ် legit ရှိပါတယ် လူအင်အားအတိုင်ပင်ခံပေးသူရှာဖွေစုဆောင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားများသည်။ ဥပမာ, အစိုးရအဘူဒါဘီ၏စက်မှုလုပ်ငန်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူအင်အားတောင်းဆိုနေပြီ။ မြင့်မားအများအပြားနယ်ပယ်များတွင်အတွေ့အကြုံအများကြီးနှင့်အတူပညာတတ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၏ကျောင်းသားရဲ့အိပ်မက်အများစု Ferrari ပြိုင်ကားများတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့တိုင်းဝန်ဆောင်မှုသူတို့ကိုနိုင်ငံရပ်ခြားအလုပ်အကိုင်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းကိုကောင်းစွာ-paid နေရာလွတ်ရဖို့ကူညီပေးနေမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, နေရာချထားအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကိုလူတိုင်းငှားရမ်းကြသည်မဟုတ်။ တောင်မှသင်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများနှင့်အတူအခြားလူနှင့်အတူကအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
တောင်မှသူတို့ဖြစ်စဉ်ကိုမောင်းနှင်ငှားရမ်းမန်နေဂျာငှားရမ်းကတည်းက။ နှင့်ဒေသခံဝန်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သစ်တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းက။ ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီမှလူသစ်လွှဲပြောင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များဖြတ်တောက်သည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သော client များလေ့ကျင့်သင်ကြားပညာရှင်များစုဆောင်းနေကြသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, t ကိုဏအရှေ့အလယ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်ရောက်ရှိ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် Ph.D ဘွဲ့ကို သို့မဟုတ်က MBA ပညာရေးအမှုဆောင်အရာရှိအလုပ်အကိုင်များ။ နှင့်ယူအေအီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသူတွေကိုသစ်ကိုအနေအထားကိုဥရောပကနေသည်ကိုသင်ဆင်းသက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန် educaHoweverHoever ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအဘို့အစုဆောင်းမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေးများကိုဝေမျှပေးပါ။ သင့်ရဲ့ အကွံဉာဏျဆောင်းပါး၏အပိုငျးပိုငျးအခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ LinkedIn အပေါ်ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဧည့်သည်များအတွက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပို့စ်တင်တဲ့အခါမှာအစဉ်အမြဲမင်္ဂလာရှိ၏။ ကြှနျုပျတို့မှာ ရေရှည်မှာတစ်ဦးအထောက်အကူလက်ကိုပေးပါဖို့ကြိုးစားနေ.
ထိုအဖို့ဆန္ဒရှိနေသောတိုင်းအသစ်ကနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ငါတို့မွို့လမ်းညွှန်သွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဒါဟာပြီးသားမှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ်အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျကိုမျှဝေပေးနိုင်သည်။ နှင့်သင်တန်း၏ Facebook နှင့် LinkedIn ပေါ်မှာငါတို့အကြောင်းအရာတူ။ သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join မနေပါနဲ့ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်။ ရေရှည်မှာမှာတော့အဲဒါကိုကျိုးနပ်သည်။
WhatsApp ကိုအလုပ်ရှာဖွေမယ့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးသူမှကြီးမြတ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုလိမ့်မည် ကျိန်းသေသငျသညျအလုပျကိုစတငျဖို့ကူညီ။ သင့်ရဲ့ပညာရေးနှင့်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားကျွမ်းကျင်မှု။ သင်တို့ရှိသမျှတပြိုင်နက်ယူလျှင်။ သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်သားရှိသင့်ပါတယ်။ သင်ကသူတို့ကို၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ထင်လျှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရန်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Upload လုပ်ပါ။ နှင့် မှော်အဘို့စောင့်ဆိုင်းဖြစ်ပျက်.
သူတို့အခွအေနမြေိုးအရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိုချင်စကားပြော တစ်ဦးကိုရှာဖွေ ဒူဘိုင်းယောဘ ကံကောင်းတာကျနော်တို့ကဒီမှာရှိပါတယ် !.
ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအုပ်စုတစ်စု join ။ ထိုအခါကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးမှ !.
များအတွက် WhatsApp ကို Group မှ join ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေခြင်းဒူဘိုင်း, အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ဂျော့ဘ်,.